iPhone 14: Runyerekupe rutsva rwunonongedzera kukudzikiswa kwemafuremu. | Nhau dze iPhone
alex vincent | 07/04/2022 16:00 | iPhone 14, Noticias
Zvinoenderana nerunyerekupe rutsva rwakavakirwa pane yakaburitswa AutoCAD inopa, iyo iPhone 14, mune yayo Pro Max modhi inogona kusvika kusvika makumi maviri muzana mukuderedzwa kwemafuremu izvo zvaizoita kuti kumberi kwemudziyo kuve (kunyangwe) yakawanda skrini.
Iyo ichangoburwa AutoCAD renders yakagovaniswa kuburikidza ne "ShrimpApplePro" Twitter account uye inoratidza dhizaini ye iPhone 14 Pro Max inoenderana nemamwe akasara akarembera kwaainge atosiya basa notch uye maburi maviri matsva akaonekwa pachiratidziro chekamera uye iyo FaceID Yechokwadi Kudzika module. Iyo zvakare inoratidza iyo "hump" yemakamera, ayo aizowedzerwa zvakare kunyangwe ari akafanana dhizaini kune iyo iPhone 12 uye 13 Pro.
Mafuremu eiyi iPhone 14 Pro Max angave ari 1,95mm gobvu, iko kudzikisira mune zvatatova nazvo pa iPhone 13 Pro Max (2,42mm). Chimwe chezvikonzero zvekudzikiswa kwemafuremu chinogona kunge chine chekuita nechinhambwe icho Apple ingade kusiya pakati pemakomba matsva ambotaurwa muchiratidziro uye furemu pachayo, zvichisiya 2,29mm pakati pefuremu nemasensa.
Zvisinei, kudzikiswa kwemafuremu uku kwaisazove nekukanganisa kukuru pamberi pechidzitiro nemeso. Gore rapfuura, gakava pakati pevashandisi nezve musiyano wemafuremu pakati peiyo iPhone 12 Pro uye 13 Pro yakamuka, uko maererano nezviyero zvakaitwa naQuinn Nelson, zvakaratidzwa kuti mafuremu eiyo iPhone 13 Pro aive akakora zvishoma pane ayo iPhone 12 Pro, saka Apple ingadai yakateerera vashandisi kuti vaite zvese zvinogoneka kudzikisa aya mafuremu.
Nekudaro, kuderedzwa kwe20% mumabezels kune chokwadi chekuita shanduko inooneka kupfuura pakati pegore rapfuura 12 Pro uye 13 Pro kuratidza. Ukuwo, tinofanira kufunga nezvazvo Chiyero ichi hachisanganisi kukora kwesimbi isina tsvina pamucheto wechigadzirwa, iyo inosvika 1,15mm.
Pane runyerekupe rwakawanda rwakatimirira pakati pezvino uye zuva rakada kuvimbiswa raGunyana umo iyo iPhone 14 inobuda, asi kana rwizi rwarira ... Zvichida kubviswa kwechinyorwa uye kuderedzwa kwemapuranga kuchava chimwe chezvinhu zvikuru zvemuenzaniso wegore rino.Zvisinei, kusvika munaSeptember hatizokwanisi kusimbisa izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 14 » iPhone 14: Runyerekupe rutsva rwunonongedzera kukudzikiswa kwemafuremu.
Apple inodyidzana neLG kuunza OLED uye inopengeka iPads uye MacBooks